October 2017 – ရွှေလရောင်
စမတ်ဖုန်း အားသွင်းလျှင် သင့်ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ ၆မျိုး
slyadmin October 31, 2017
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဘီလီယံ ပေါင်းများစွား Android / iOS ထုတ်ကုန် များကို အသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလဲ လူတိုင်း ဘက်ထရီ အားဖြည့်တဲ့ ပြဿနာအမြဲရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ Android mobile Operating System ကတော့ အခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် အား သုံးစွဲမှု အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်…
လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးသော ” ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ” ပူဇော် ကန်တော့ ၀န်ချတောင်းပန်နည်း ”
#လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးသော ” ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ” ပူဇော် ကန်တော့ ၀န်ချတောင်းပန်နည်း ” အဘမင်းသိင်္ခရဲ့ မရမ်းတလင်း အယူတော်မင်္ဂလာခြံကြီးမှာ အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်တိုင်း ပြုလုပ်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား ရှိခိုးပူဇော် ကန်တော့ ၀န်ချ တောင်းပန်နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ….။ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ မိမိတို့အိမ်မှာပင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပူဇော်ကန်တော့နိုင်ရန်ဆိုတဲ့…
ပညာရှိတဲ့မိန်းမက ​ကြေကွဲမူကိုတိတ်​တဆိတ်​သိမ်းဆည်းထား​ပေမယ့်​ ပညာမဲ့တဲ့မိန်းမက​ကြေကွဲမူကိ ​ပေါက်​ကွဲခြင်းနဲ့ရှင်းလင်းလိုက်​တယ်​။ ပညာရှိတဲ့မိန်းမကအရူံးကိုအပြုံးနဲ့ကာဆီးလိုက်​​ပေမယ့်​ ပညာမဲ့တဲ့မိန်းမကအရူံးကို အမုန်းနဲ့ဖွင့်​ထုတ်​ပြတယ်​။ ပညာရှိတဲ့မိန်းမကအလှအပကို ကိုယ်​ကျင့်​တရားနဲ့ ဝန်းရံထား​ပေမယ့်​ ပညာမဲ့တဲ့မိန်းမကအလှအပကိ ​ငွေ​ကြေးနဲ့လဲလှယ်​လိုက်​တယ်​… ပညာရှိတဲ့မိန်းမက​အောင်​မြင်​မူကို တိတ်​တဆိတ်​ ရယူလိုက်​​ပေမယ့်​ ပညာမဲ့တဲ့မိန်းမက​အောင်​မြင်​မူကို ကြွားဝါခြင်းနဲ့ ရယူလိုက်​တယ်​… ပညာရှိတဲ့မိန်းမက ဘဝအ​ရေးအတွတ်​ကိုသာ အချိန်​​ပေးတတ်​​ပေမယ့်​ ပညာမဲ့တဲ့မိန်းမက အလှအ​ရေးအတွတ်​ပဲ အချိန်​ဖြုန်းတတ်​ကြတယ်​……
slyadmin October 30, 2017
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျဒီနေ့ ကျွန်တော် အရေပြား လေးဘက်နာ အကြောင်း ပြောပြပါ့မယ်။ SLE ဆိုတာဘာလဲ…? SLE ဆိုတာက အရေပြား လေးဘက်နာ ရောဂါ ကိုဆိုလိုပြီး အပြည့်အစုံက(Systemic Lupus Erythematosus)ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြား လေးဘက်နာ ရောဂါ ဟာ(Lupus)လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒီပိုးဟာ…
အိမ်ထောင်ရေး နဲ့ အနိုင်အရှုံး
တခါတုန်းက ကျွန်မယောက်ျားဖက်က ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတစ်ယောက်က ကျွန်မကို “ငါတို့တူကို သိပ်မနိုင်ပါနဲ့ “လို့ ပြောဖူးတယ်။ ကျွန်မက ရယ်ရုံပဲနေလိုက်ပြီး မနိုင်ရပါဘူး လို့ပဲ တိုတိုပဲ တုန့်ပြန်လိုက်တယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတွေးမိတာက ကျွန်မတို့မြန်မာတွေမှာအရိုးစွဲနေတဲ့ Culture အကြောင်းပေါ့။ လင်ယောက်ျားဆိုရင် ငွေရှာပေးရင်၊မသောက်မစား၊မဖောက်မပြားနေရင်ပဲ တော်လှပြီ လို့မှတ်ထားကြတယ်။ အဲဒီ့ထက်ထူးခြားပြီး မိန်းမကို ထမင်းချက်ကျွေးတယ်တို့…
တကယ့်အချစ်စစ်မှသာ ဖြတ်ကျော်နိုင်မဲ့ အဆင့် နှစ်ဆင့်
# Zawgyi Version ဖြင့် ဖတ်ပါ # မတူညီတာတွေကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်မလား၊ ပြောင်းလဲလို့မရတာတွေလား? တကယ်ချစ်ရင်ဆိုပြီး အစချီထားတဲ့ စာတွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေကို အများကြီး ဖတ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်ရင် ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုရော ကိုယ်က တကယ်ချစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မိသလဲဆိုတာကိုရော ကောင်းကောင်းသိပြီးပြီ။ ကိုယ်ရောသူပါ အပြန်အလှန်ချစ်တယ်ဆိုတာ သေချာပြီဆိုမှ ရှေ့ဆက်နိုင်မှာပေါ့။…
အရေးကြီးတဲ့ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီး မျက်နှာကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နည်း
slyadmin October 29, 2017
# Zawgyi Version ဖြင့် ဖတ်ပါ # မျက်နှာအရေပြား လှပကျန်းမာစေဖို့အတွက် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး ဂရုစိုက်ရမယ့် နည်းလမ်းကတော့ သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောပြီးတော့ ဘာမှမလိမ်းပဲ အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ ဘာမှမလိမ်းပဲ အိပ်စက်ခြင်းက အဆီပြန်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပေးပြီး မျက်နှာက ပျက်ဆီးသွားတဲ့ ဆဲလ်တွေကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ပြု…
# Zawgyi Version ဖြင့် ဖတ်ပါ # အိပ်ရေးမဝဘူး၊ အိပ်ရေးပျက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို သူများတွေဆီကပဲ ကြားနေရတယ်။ ကိုယ်က တစ်ခါမှမပြောဖြစ်ဘူး။ တစ်ညကို ၄ နာရီလောက်အိပ်ရင်ပဲ အိပ်ရေးဝပြီလို့ မှတ်နေမိတယ်။ တကယ်တော့ အိပ်ရေးဝရဲ့လားဆိုတာကို ခန္ဓာကိုယ်ကပဲ ပြောပြနေမှာပါ။ ဒီအချက်တွေ ဖြစ်နေပြီဆိုရင် သင်ဟာ အိပ်ချိန်လုံလုံလောက်လောက်မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။…
သင့်နားက သင့်ကိုချစ်ခင်ကြသူတွေဟာ သင့်ဆီက ဘာကိုအလိုရှိကြသလဲဆိုတာ
slyadmin October 28, 2017
သင့်ကိုချစ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းနဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီ သင်သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်က ဘယ်တုန်က များလဲ။ အသေအချာ ပြန်မေးရရင် စာတွေပို့တဲ့အချိန်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လိုနေရာမျိုးမှာ ပို့စ်တွေလုပ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ သူတို့ဆီကို သင်ကိုယ်တိုင်အရောက်သွားပြီး စကားတွေပြော၊ သတင်းကောင်းတွေ ဝေမျှတဲ့အချိန်မျိုးကို ပြောတာပါ။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ သင်ဟာ သင့်ချစ်တဲ့သူတွေကို…
ခွန်တန်မှ မိန်းမပျိုလေးများအား ဖျက်ဆီးနေသည်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးများ ပြောကြား
slyadmin October 27, 2017
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ဇရစ်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ အလံတစ်ရာဘုရား သာသနာ့နယ်မြေအတွင်း ဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီး မိန်းမပျိုလေးတွေကို ဖျက်ဆီးခံနေရတယ်လို့ပြောဆိုနေတာဟာ မမှန်ကန်ဘူးလို့ ကာယရှင်မိန်းမပျိုတွေက ပြောပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ခွန်တန် (ခေါ်) ဇာတ်လိုက်က ဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးမိန်းမပျိုလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနေပြီး၊ ပန်းဦးလွှတ်ခံနေရတယ်လို ပြောဆိုနေကြတဲ့ အတွက်ကာယကံရှင် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိကြောင်း၊ ပန်းဦး လွှတ်ခံရတယ်ဆိုတာဟာ…